Fikarohana momba ny firaisana Laurel sy Hardy Reborn: Manomana fotoana fohy tahaka an'i Stan sy Ollie novana ho roa mirahalahy, Josh sy Danny Bacher - Fikarohana momba ny vatana vaovao
Laurel sy Hardy Reborn: Manomana fotoana fohy tahaka an'i Stan sy Ollie navangavoka ho roa mirahalahy, Josh sy Danny Bacher
Cases Proposed amin'ny: Walter Semkiw, MD
Fihetsehana nasongadina tamin'ny: Ahtun Re ao amin'ny sehatry ny Ryerson-Semkiw
From Teraka indray tamin'ny International Edition, nataon'i Walter Semkiw, MD
Ny Fanahy Ahtun Re dia tsy hanambara ny mombamomba an'i Laurel sy Hardy ankehitriny
Niara-niasa tamin'ny media trance aho Kevin Ryerson, izay nalaza tamin'ny fiaraha-miasa taminy Shirley MacLaine, hatramin'ny 2001. Hatramin'io fotoana io, fanahy iray izay nantsoina hoe fahitalavitra Kevin Ahtun Rnoporofoiny tamiko fa manana fahaizana manao ny fiainana taloha izy miaraka amin'ny marim-pototra avo lenta. Ny tranga mampiseho an-tsehatra ny fahaizan'i Ahtun Re dia azo zahana amin'ny:
Ireo vohikala nateraky ny kibon-drazana voatery niainga avy amin'ny Ahtun Re, Kevin Ryerson ary Walter Semkiw, MD
Andiam-tranga iray izay mampiseho amin'ny fomba mahavariana ny fahafahan'ny Ahtun Re manao ny lalao taloha azo tanterahina dia misy tranga momba ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao any Laurel & Hardy. Rehefa avy niara-niasa tamin'i Kevin Ryerson nandritra ny volana vitsivitsy tamin'ny faran'ny taona 2001 sy ny fiandohan'ny taona 2002 ary nahatsapa fa Ahtun Re dia afaka nanao izay toa marina teo amin'ny fiainana taloha, nanomboka nanontany momba ny olona fanta-daza aho. Ho an'ireo tarehimarika amin'izao fotoana izao nanontany momba ny fiainana taloha aho, ho an'ireo olo-malaza ara-tantara, nanontany aho raha niverina ho nofo izy ireo tamin'ny vanim-potoana ankehitriny.
Nanomboka tamin'i 2003 aho dia nanontany an'i Ahtun Re raha efa niorina tamin'ny laoniny ankehitriny i Laurel sy Hardy. Ahtun Re nilaza tamiko fa nanana izy ireo, saingy tsy nanambara tamiko izy ireo hoe iza izy ireo, izay nanenika ahy. Rehefa nanontany aho hoe maninona izy no tsy afaka mamoaka ny mombamomba azy amiko, dia namaly fotsiny i Ahtun Re hoe: "Tsy afaka milaza aminao izahay amin'izao fotoana izao."
Nandritra ny herintaona, nanandrana nandamina ny didim-pitsarako aho tamin'ny fanombanana ny lalao. Manontany aho raha mety ho ny tsangambatom-piainan'i Stan Laurel isan-karazany ireo mpanao hatsikana malaza amin'izao fotoana izao ary raha mety ho Oliver Hardy vincarné ny karazana kardinaly samihafa. Ho an'ireo fifanandrinana rehetra ananako rehetra dia nilaza tamiko i Ahtun Re fa diso ny lalao novolavolaina, saingy tsy nety nilaza tamiko izy hoe iza moa i Laurel sy Hardy amin'izao fotoana izao. Rehefa reraka ireo fahafaha-maimaim-poana azoko eritreretina dia nandao sy nanadino ity olana ity nandritra ny herintaona aho.
Ny Torolalana ho an'ny Fanahy Ahtun Re dia tsy manangana fanoratana momba ny vatana vaovao momba ny fanambadiana
Amin'ity fotoana ity dia tiako ny hanasongadina fa iray amin'ireo antony nitomboako hitokisana ny fahafahan'i Ahtun Re ho afaka hanao lalao iainan'ny fiainana taloha dia ny hoe tsy "fametahana grippe" izy io.
Ny mifanohitra amin'izany aza, ny ankamaroan'ny baolina atolotr'ity olona ity dia heverina ho tsy marina amin'ny Ahtun Re. Rehefa miezaka ny hamaha ny lalao taloha aho, Ahtun Re dia hilaza amiko fa diso aho, fa rehefa hita ny lalao marina ary avy eo nohamafisin'i Ahtun Re, dia mitovitovy amin'ny tranga tena izy io. Ny traikefako amin'i Ahtun Re, amin'ny seza isam-bolana izay natao nanomboka tamin'ny 2001, ary ny tahiry momba ny tranga nahaterahana an'arivony tapitrisa, izay manome ahy ny fomba fijeriny ny fahaizan'izy ireo hahalavorary ny fiainam-baovao marina.
Ny fanamboarana indray ny Laurel sy Hardy: Ny ekipa Comedy vaovao tsara indrindra
Andao isika hiverina amin'ny tranga misy an'i Laurel sy Hardy. Araka ny voalaza, satria i Ahtun Re dia tsy hanambara ny toetoetran'I Stan sy ny Ollie amin'izao fotoana izao ary nanohitra ny fomba fijeriko maro izy, dia nitsahatra tsy nahita azy ireo aho. Herintaona na roa no lasa rehefa nisintona tampoka ny fahalianako tamin'ny nahitako ny fonon'ilay tranainy iray Vato mikodiadia gazety izay napetraka tao amin'ny efitranom-panadinana iray, izay nanana lohateny kely momba azy io, "ekipa tsara indrindra amin'ny Comedy". Na dia teo am-pamakiana ny pejy tsirairay tamin'ity gazety ity aza aho dia tsy nahita na inona na inona tao anatiny momba ny ekipa mpilalao sarimihetsika vaovao , saingy nanana fahatsapana aho fa tokony hikaroka Internet ho an'ny ekipa mpilalao baolina kitra.
Nitranga tamin'ny Novambra 2005 izany ary rehefa nikaroka ny aterineto aho dia nahita tranonkala dokambarotra fampisehoana mitondra ny lohateny, Ny fampisehoana mampihetsi-po indrindra eran'izao tontolo izao momba ny tantaran'ny komisiona, nataon'ny rahalahy roa, tao anatin'ny roa ora latsaka, nandritra ny roapolo tapitrisa dolara, izay hatao amin'ny volana janoary 2006 any New York City. Hitako ny sarin'ireo rahalahy roa, Josh sy Danny Bacher, izay nantsoina hoe Bacher Boys, ary nisy tsikombakomba be teo amin'ny tarehiko.
Tsy hoe mampihomehy voajanahary fotsiny izy mirahalahy ireto fa mampihomehy toa an'i Laurel sy Hardy koa. Fantatro tsara fa fantatro fa nahita azy ireo aho. I Josh, ilay zokilahy lahy, dia ilay olona mahia Stan Laurel mahia ary i Danny Hardy somary saro-kenatra. Raha ny marina, ny hany fahasamihafana lehibe eo amin'ny fisehoana eo amin'i Stan sy Ollie ary Josh sy Danny dia satria i Oliver Hardy dia mavesatra kokoa noho i Danny.
Fanahy maha-Ahtun Re dia manamafy an'i Josh sy Danny ho Laurel & Hardy Reincarnated
Tamin'ny resadresaka manaraka nataoko niaraka tamin'i Kevin Ryerson, rehefa avy nandà ny alaheloko rehetra izay nataoko ho an'i Laurel sy Hardy, dia nanamafy i Ahtun Re fa i Josh sy Danny Bacher no ekipa mpilalao sarimihetsika fanta-daza ao Stan Laurel sy Oliver Hardy.
Zava-dehibe ho ahy ny mizara fa ao amin'ny tranokalan'i Josh sy Danny manokana, ary koa ny tranokalan'ny teatra niarahan'izy ireo, dia nisy tanteraka Tsy miresaka momba an'i Josh sy Danny izay manana fiaraha-miory amin'i Laurel sy Hardy.
Hafa noho ny lohatenin'ny seho nataon'izy ireo, tsy nisy famaritana momba izay ho ao anatin'ny seho ataon'izy ireo. Raha lazaina amin'ny teny hafa, rehefa saika hifandray tamin'ireo zazalahy Bacher aho momba ny raharaham-piainany taloha, tsy azoko an-tsaina hoe ahoana no havalin'izy ireo rehefa nolazaina fa izy ireo dia teraka tao amin'ny vatana vaovao indray i Laurel sy Hardy. Araka ny hianarantsika etsy ambany, i Josh sy Danny dia niaina ny fiainan'i Laurel & Hardy hatramin'ny fahazazany.
Stan Laurel sy Oliver Hardy tantaram-piainana
Teraka tany 1890, any Ulverston, Angletera i Stan Laurel, raha teraka tany Harlem, Georgia, any Etazonia i Oliver Hardy. Stan dia mpanao hatsikana tany Glasgow ary tonga tany Etazonia, izay nanatevin-daharana vondrona fitsangatsanganana izay nahitana an'i Charlie Chaplin, izay nitondra azy tany Los Angeles. Stan, teny an-dalana, dia nino ny vatana vaovao indray ary ity lohahevitra ity dia naseho tamin'ny sarimihetsika mahazatra an'i Laurel & Hardy, The Flying Deuces.
Nanomboka nanao ny asany i Oliver tamin'ny fampisehoana minstel ary tamin'ny olon-dehibe dia nifindra monina tany Californie ary nanao sonia niaraka tamin'ny mpamokatra ho an'ny Hal Roach. Leo McCarey, tale iray miasa ho an'i Roach, dia naniry ny hamorona ekipa mpanao hatsikana ho an'ny sarimihetsika sarimihetsika misy lehilahy malaina miaraka amin'ny lehilahy matavy. McCarey dia nitarika an'i Stan Laurel sy i Oliver Hardy ho an'ny tetikasa ary ny ekipa comedy izay haharitra hatramin'ny taona 20 dia teraka.
Ian Stevenson, MD Study Twins dia manohana Souls plan indraindray
Niaraka tamin'ny fiheverako fa nahita ny fiverenan'i Laurel sy Hardy tamin'ny fiverenana indray tamin'ny lasa roa aho, dia nanontany tena aho hoe ahoana no fomba fiasan'ny vatana vaovao sy ny fiainana. Raha ny trangan'i Stan sy Ollie | Josh sy Danny dia manan-kery, avy eo dia nisy ekipa mpilalao comédie izay nivory avy any amin'ny Oseana Atlantika tao 1926 dia nihaona indray tamin'ny naha-rahalahy roa, izay nanao fampihomehezana indray tao New York City, 80 taona maro taty aoriana.
Ian Stevenson dia nianatra momba ny trangan'ny kambana 31 izay nanaovana fanandramana an-tsitrapo ny fiainany taloha. Tao anatin'ny tranga 31 rehetra dia nifandray akaiky ny kambana tao anatin'ny lasa vao lasa. Ny karazana fialam-boly mahazatra indrindra dia ny an'ny iray tam-po, izay maneho ny 11 / 31 na 35% ny tranga.
Ny kambana kambana dia kambana koa tamin'ny fanombohan'ny talohan'izy ireo.
Ao amin'ny 9 / 31 na 29% momba ny tranga roa, ny kambana dia namana, olom-pantatra na mpiara-miasa. Ny fifandraisan'ny fianakaviana, toy ny hoe zanak'olo-mpiray tam-po, dia namorona 6 / 31 na 19% momba ny tranga roa. Ao amin'ny 5 / 31 na 16% momba ny tranga roa kilaometatra, ireo mpivady dia nanambady tamin'ny lasa vao tafaverina. (1)
Ao amin'ny tranga vao teraka indray ny zana-biriky birmanina izay tao anatin'ity fanadihadiana ity, dia misy sary afaka mampiseho fa ny endriny ara-batana dia nifanaraka tamin'ny fiainana iray manontolo. Ao amin'ny sary omena etsy ambony, Phyu indray dia niorina indray tamin'ny niorenan'i San ary i Saipai ho toy ny Nyunt. Phyu sy Saipai dia rahavavy izay tena akaiky. Maty ireo vehivavy zokiolona ary navaozina ho kambana, San sy Nyunt. Raha te hianatra bebe kokoa, mandehana any amin'ny:
Ny zaza teraka tamin'ny zaza teraka tany Burmese dia miteraka firaisana ara-batana
Ny fandinihana roa nataon'i Ian Stevenson dia mampiseho fa ny fanahy, ao anatin'izany ny havany, ny sakaizany ary ny mpiara-miasa aminy dia afaka mikasa ny hanana fiainana ho avy ary ho teraka miaraka ao anatin'ny fianakaviana, araka ny naseho tao amin'ny Laurel & Hardy | Tranga Bacher Boys.
Ny Reincarnations an'i Laurel & Hardy dia natsangana ho jiosy: fiovana amin'ny fivavahana
Na dia nipetraka tany San Francisco aho dia nantsoiko hoe Theater for the New City, tany Manhattan, izay i Josh sy Danny no hanao, ary nividy tapakila ho an'ny fampisehoana. Nangataka ihany koa aho fa hifandray amiko ireo rahalahy Bacher, izay milaza fa afaka mampifandray azy ireo any Hollywood.
Araka ny nomarihina etsy ambony, tsy fantatro ny fihetsik'i Josh sy Danny rehefa nanoro hevitra azy ireo aho fa raha ny fiarahako miasa miaraka amin'i Kevin sy Ahtun Re, dia ny vatana vaovao indray i Laurel & Hardy. Tsy nisy na inona na inona tao amin'ny tranonkalany na tranokala fanaovana teatra nilaza fa nanana fifandraisana akaiky tamin'i Laurel & Hardy izy ireo. Ho ahy, ny tsy fisian'ny fahalalana mialoha momba ireo raharaha ireo dia nampiaiky ahy manokana ny fanamafisan'i Ahtun Re an'ireo tranga teraka tao amin'ny vatana vaovao hafa.
Trangam-piaraha-miasa: Ny Reincarnations an'i Oliver Hardy dia mampiseho ny fitaomana lehibe nananan'i Laurel sy Hardy teo amin'ny fiainan'ny Rahalahy
Niantso ahy nandritra ny roa andro i Danny Bacher. Rehefa avy niresaka ny fomba ahafahako manampy azy ireo amin'ny asany ry zareo dia nilaza tamin'i Danny momba ny bokiko aho, Fiverenan'ny revolisionera, ary avy eo dia nanazava tamim-pitandremana an'i Danny ireo fitsipika momba ny fahaterahana indray ao amin'ny vatana vaovao izay nipoitra avy amin'ny tranga notadiavina Ian Stevenson, MD ny Oniversite an'i Virgina, ary ny raharaha dia voavaha tamin'ny alalan'ny asako amin'i Kevin Ryerson.
Nanontany an'i Danny aho raha manana tanjaka ara-panahy manokana izy ary novaliany hoe: "Notezaina tamin'ny jiosy izahay." Azoko lazaina fa nanomboka nanontany tena i Danny hoe aiza izao no alehany ary inona no tsy maintsy nataon'izy ireo tamin'ny asany. Nipoitra avy eo aho hoe: "Ianao sy Josh dia voamarina fa ny fiverenan'i Laurel sy Hardy indray ny an'i Ahtun Re, mpitarika ara-panahy egyptiana notarihin'i Kevin Ryerson."
Rehefa afaka kelikely, dia namaly i Danny hoe: "Tsy fantatro ny momba ireo zavatra vaovao momba ny vatana vaovao, fa ny zavatra lazainao dia tena mahaliana, satria ny lavitra indrindra dia ny fiantraikany lehibe indrindra eo amin'ny fiainantsika, sy ny fampielezan-kevitsika, ny Laurel sy Hardy."
Ny tranga teraka tao amin'ny vatana vaovao indray dia nanjary nanintona ny olona tamin'ny fiainany taloha ho "tranga misy ifandraisany". Ohatra iray amin'ny tranga maha-lahy na vavy ny: Trangam-panjakan'olo-tokana i Dorothy Dandridge Halle Berry
Ny Reincarnation an'i Oliver Hardy dia manana ny patalohan'i Ollie sy ny valiny ary ny fitrangan'ny toetrandro
Ny zavatra nianarako taty aoriana dia nahatonga ahy ho tezitra. Nanazava i Danny fa iray amin'ireo mpanangom-pahaiza-misongadina malaza indrindra eran-tany i Laurel sy Hardy. Danny dia manana pataloha roa izay notanterahin'i Oliver Hardy tao amin'ny dihy malaza nalaina sary Miankandrefana. Araka ny sary etsy ambony, manana paompy roa i Danny ary ao ambadiky ny rindrina ao amin'ny rindrin'ny efitranony.
Danny koa dia manana palitao feno izay nanaovan'i Oliver Hardy, izay nitafy manikin izay nijoro teo amin'ny zoron'ny efitranon'i Danny. Nahazo palitao nanaovan'i Stanley Laurel an'ireo zazalahy ireo koa, izay eo akaikin'ny akanjon'i Ollie. Ity akanjo ity, fananan'i Laurel & Hardy ary ankehitriny fananan'ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao any Laurel & Hardy, dia aseho amin'ny ankavanana. Ho fanampin'izay, niara-nipetraka nandritra ny taona maro tao amin'ny trano tanàna i Josh sy Danny niaraka tamin'ny artifak'i Laurel sy Hardy an'arivony naseho.
Inona ireo zava-tsarotra izay hiantso ireo mpitsikilo roa tsy fantatra anarana, izay tsy nisy nandre, niantso ahy hampahafantatra fa izy ireo dia ny fiverenan'i Laurel sy Hardy indray, mifototra amin'ny fanamafisana ny torolalan'ny Ejipsianina maty efa maty 3000 taona, ary iza no miezaka manana ny akanjon'ny Laurel sy Hardy ao an-tranony ho fananana sarobidy?
Ny namako dokotera iray dia nanamarina fa ny fahasamihafana eo amin 'io dia miteraka astronomia.
Jereo ny horonan-tsary: Fanangonana Laurel & Hardy Memorabilia an'i Danny Bacher
Fitondra-tena sy mozika taloha: Josh sy Danny Drive manodidina an'i New York miaraka amin'i Laurel & Hardy Theme Music
Ny ohatra iray hafa momba ny fahafantarana farany an'i Josh sy Danny tamin'i Laurel sy Hardy dia niverina tamin'ny taona 1991, rehefa nividy ny fiarany voalohany ireo zazalahy ireo tamin'ny alàlan'ny tahiry avy amin'ny lalan'ny gazety. Josh sy Danny dia namorona kasety kasety misy mozika natambatra tamin'ny sarimihetsika nataon'i Laurel sy Hardy. Niara-nitondra fiara manodidina ny New York City sy New Jersey tao Plymouth izy ireo rehefa nilalao mozika avy amin'ny sarimihetsika Laurel sy Hardy. Ny zavatra tokana mety mifanaraka kokoa dia raha toa ka mitondra fiara Ford Model T midina Broadway izy ireo.
Saintsaino ny tsy fahita firy amin'ny fanaovana kasety mozika lohahevitra Laurel sy Hardy ary milalao azy io rehefa mitondra fiara. Mariho fa nanao izany i Josh sy Danny efa ho 15 taona talohan'ny nifandraisako tamin'izy ireo hampahafantatra azy ireo fa izy ireo dia teraka tao amin'ny vatana vaovao indray i Laurel sy Hardy. Averina indray, inona ny mety ho sendra an'izany sendra izany?
Metafysical Center of New Jersey: Fifandraisana amin'ny synchronisme
Taorian'ny resaka nifanaovanay voalohany dia nandefa an'i Josh sy Danny aho tamin'ny dika mitovy amin'ny bokiko, Fiverenan'ny revolisionera, Ary ny Horonan-tsary avy amin'i Barbro Karlen milaza ny tantarany tamin'ny maha-vovoka ho teraka tamin'i Anne Frank, izay ho ahy, dia iray amin'ireo zava-dehibe indrindra amin'ny tranga farany teo amin'ny fiainana. Nikasa ny hanatrika ny fampisehoana tany New York aho satria iray, te-hihaona tamin'ny fiverenan'i Laurel sy Hardy indray aho, ary ny roa, te hahafantatra aho raha toa i Josh sy Danny afaka mampihomehy ny olona toa an'i Laurel sy Hardy.
Niara-niasa tamin'ny famolavolana ny fampisehoana an-tsokosoko tany New York aho, ho fomba iray hanamafisana ny maha-zava-dehibe ny dia ataoko mankany amin'ny morontsiraka atsinanana. Vao haingana aho no nanolotra ny New Expo (New Life Expo) tao New York City tamin'ny Oktobra 2005, izay nanatrehan'i Harriet Wagniere, Talen'ny Metafysical Center of New Jersey, izay nanontany raha handinika ny teniko any amin'ny foibeny any Wayne, New Jersey aho. Tamin'izay fotoana izay, nilaza taminy aho fa tiako, nefa tsy fantatro hoe rahoviana aho no hiverina any amin'ilay faritra, satria niaina tany Kalifornia aho.
Ankehitriny, raha te ho any New York aho hahita ny Bacher Boys, niantso an 'i Harriet aho hanontany raha toa ka afaka miteny eo afovoany izy ireo amin'io herinandro io amin'ny volana Janoary 2006. Na dia nilazako tamin'i Danny aza aho fa hitazona ny lalao Laurel sy Hardy mangina mandra-pahatonga ireo rahalahy handany izany, dia tsy afaka manohitra ny hizara ny zava-miafina amin'i Harriet aho. Nolazaiko azy fa tonga any New York aho mba hihaona amin'ny vodilahan'i Laurel sy Hardy. Gaga i Harriet ary nanontany hoe: "Fantatro hoe iza izy ireo?"
Taorian'ny fotoana fohy dia niezaka ny hitazona ny tsiambaratelo tsiambaratelo, dia nanoro hevitra an'i Harriet aho fa tsy hilaza afa-tsy raha tsy mamoaka ny vaovao amin'ny olona izy. Nanaiky i Harriet ary dia namela ny maha-izy azy ny Laurel sy Hardy reincarnated. Avy eo i Harriet dia niteny hoe, "Fantatro i Josh sy Danny Bacher, dia nampianatra sekoly ambaratonga faharoa tany Wayne aho ary izy ireo no mpianatro!"
Rehefa nolazain'i Harriet izany, dia somary lava loatra aho tamin'ny fifandrifian-javatra, nefa koa nanantena fa hitranga ny fisehoan-javatra momba ny firaisana ara-nofo ao anatin'ny fikarohana momba ny vatana vaovao. Tamin'ny farany, io fifandrifian-kery io dia nahatonga ny Metaphysical Center of New Jersey nampiantrano ny fampisehoana tany amin'ny toerana iray tao Wayne, New Jersey, dimy minitra avy eo izay niainan'ny ray aman-drenin'i Josh sy Danny, izay manodidina ny fiara 40 minitra avy any New York City.
Ahoana no ahatongavan'ireo fifandraisana misy ifandrindrana ireo? Ny fomba iray dia ny fahalalan'ny fanahintsika zavatra maro hafa izay fantatsika amin'ny fahatsiarovantsika olombelona voafetra. Amin'ny tranga misy an'i Harriet, mety ho fantatr'i Ahtun Re fa amin'ny farany dia ho hitako ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao indray an'i Laurel & Hardy, izay fantatr'i Harriet fa mpampianatra azy ireo tamin'ny nofo taloha. Ny fifandraisana teo amin'ny fanahin'i Ahtun Re, ny fanahiko ary ny fanahin'i Harriet momba ny fanondroana an'i Laurel & Hardy ho avy dia mety nanamora ny fanasan'i Harriet ahy hiteny ao amin'ny foibeny metafizika.
Fitondran-tena taloha: Josh & Danny mamerina ny fifandraisan'i Laurel sy Hardy
Nahita an'i Josh sy Danny aho tamin'ny Janoary 14, 2006 ary dia nihomehy mafy aho, toy ny nihomehezako tamin'ny fanesoana an'i Stan sy Ollie. Na dia taranaka hafa aza izy ireo, dia mampihomehy izy ireo ary mifankatia tahaka ny nataon'i Stan sy i Ollie. Josh, ilay rahalahy marevaka, dia milalao ny anjara asan'ny tsy manan-tsiny, indraindray ny fisafotofotoana, izay afaka manapaka ny fikomiana rehefa mandalo ny drafitra iray, raha i Danny, ilay rahalahy madinidinika kely, dia milalao ny anjara toeran'ny sariitatra, mahira-tsaina ary an'izao tontolo izao Tsy azo ihodivirana ny fisalasalan'i Josh.
Reincarnation & Talenta fiainana taloha: Josh & Danny mamorona sarimihetsika mangina
Ny lohahevitra ho ahy dia sarimihetsika mangina izay noforonin'i Josh sy Danny noho ny fahombiazany. Izany dia mahatsikaiky toy ny horonantsary mangina izay natsangana an'i Hal Roach, feno ravinkazo, gililla iray eo am-pelatanana, polisy miafina Keystone sy tovovavy jamba izay manentana ny fiaraha-miory ary miaraka amin'izay dia manome an'i Danny ho tafintohina amin'ny faritra manokana miaraka amin'ny trondro fotsy. Tao anatin'izany horonantsary mangina izany sy tamin'ny ankapobeny, nandritra ny fampisehoana manontolo, Josh sy Danny dia namerina indray ny fampiroboroboana an'i Camel sy Hardy, Peter Teekamp dia nanavao ny fivoaran'ny artistikan'i Paul Gauguin ary Alexandra Nechita dia nanavao ny asan'i Picasso.
Tsarovy fa tsy maro amin'ireo tantara an-tsary amin'ny andro maoderina no mamorona sarimihetsika malaza 1920 amin'ny endrika fihomehezana. Tsy mbola nahita sarimihetsika mangina aho androany, mandra-pahitako ny iray izay noforonin'i Josh sy Danny. Raha te hijery ny dika amin'ny horonan-tsary nosoratany ho an'ny Internet, azafady mankany:
Sarimihetsika mangina nataon'i Josh & Danny Bacher: Ny sivana tsy ara-dalàna amin'ny lalàna
Voninahitra ho ahy ny fananan'i Josh sy Danny, ary koa ny ray aman-drenin'izy ireo, Joel sy Jane, hanatrika ny famelabelarako momba ny fikarohana momba ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao indray ny andro taorian'ny fampisehoana Bacher Boys 'New York City. Tao Wayne, New Jersey no nisehoan'ity fampisehoana ity. Afaka jerena ho toy ny kisendrasendra fotsiny ny fampiarahantsika an'i Harriet Wagniere, fa araka ny noresahina tetsy ambony, dia azo raisina ho toy ny asan'ny fitarihana ara-panahy ihany koa izany.
Diniho ny raharaha Kapiteny Robert Snow ary ny fomba nentina nentina tany New Orleans ny vadiny, izay nahitany ny sarin'ny vehivavy mipetrapetraka, ary ny fiainany taloha tahaka an'i Carroll Beckwith. Na dia ny vadin'ny kapiteny Snow sy ny Harriet Wagniere aza dia mety tsy nanam-peo tamin'ny fahitalavitra milaza azy ireo ny tokony hatao, ny hevitra sy ny faniriana dia mety ho toy ny mahomby amin'ny fandrindrana ny hetsika.
Tranga momba ny firaisana amin'ny vatana vaovao indray: Amin'ny maha ankizy, Josh sy Danny dia variana amin'ny saribakoly Laurel & Hardy
Ny Bacher Boys sy ny ray aman-dreniny dia nahita ny tolo-kevitr'i Josh sy Danny ho fampandrosoana an'i Laurel sy Hardy tamin'ny vatana vaovao ary nahamarika ny fifandirana izy ireo. Teraka tamin'ny volana 22, 1976 i Josh, 11 taona taorian'ny nahafatesan'i Stan Laurel. Rehefa teraka i Josh dia nomeny ny saribakolin'i Laurel sy Hardy avy amin'i Sally, zanak'olo-mpiray tam-po aminy. Mitantara i Joel sy Jane Bacher fa ny zanany, Josh, dia tia ireo saribakoly Laurel sy Hardy ary lasa kilalao tena tiany izy ireo.
Teraka tamin'ny Janoary 15, 1978 i Danny tamin'ny Janoary 2 taona taorian'ny Josh ary 20 taona teo ho eo taorian'ny nahafatesan'i Oliver Hardy. Nandritra ireo taona teo aloha, dia niara-nilalao tamin'ny saribakoly Laurel sy Hardy i Josh, tamin'ny fotoana nahatonga an'i Danny ho teraka, ny lohan'ny fingotra ihany no mbola velona. Nandritra ny fahazazany, dia nanohy nilalao tamin'ny lohany Stan sy Ollie i Josh sy Danny ary mbola manana azy ireo, am-polony taona aty aoriana.
Tahaka ny ankizy, i Josh sy Danny dia nanahaka an'i Laurel sy Hardy matetika. Josh foana i Stan ary i Dan foana i Ollie. I Danny dia nitarika an'i Oliver ho toy ny fikosoham-bary eo amin'ny kilalaony ary izy tenany mihitsy no hanao ny volombavan'i Ollie izay avy amin'ny fahatsapana mainty, izay hampiakariny amin'ny lipony ambony miaraka amin'ny kasety mangarahara. Raha i Danny no nitarika ny volombavan'i Ollie, dia hanahaka an'i Stanley i Josh, ary manitsakitsaka ny lohany.
Josh sy Danny dia nanao toa an'i Stan sy Ollie isaky ny mahavita azy ireo ary i Joel sy Jane Bacher, ray aman-dreniny, dia mampiseho fa sarotra izany, na dia miala voly aza, mivoaka any amin'izao tontolo izao, manao fivarotana sy raharaha, miaraka amin'i Laurel sy Hardy kely (antenaina fa tsy Maro ny fananana, toy ny pianôla sy fiara, no rava nandritra izany dingana izany).
Ankoatr'izay, Mr. Bacher, mpampanao fitsarana iray, dia nitantara fa tamin'ny andron'ny fitsingerenan'ny taona nahaterahany, ireo tovolahy dia nanindry mandrakariva ny hampiseho an'i Laurel sy Hardy sarimihetsika mangina, izay nindramina avy amin'ny tranomboky teo an-toerana. Raha vao nihalehibe izy ireo, dia nampivoatra ny fampihetseham-pihetseham-po mifototra amin'i Laurel sy Hardy, sy ireo komisiana hafa taloha sy vaovao, izay niafara tamin'ny lahateniny tamin'ny Janoary 2006, New York, Off-Broadway. Ny iraka notendren'izy ireo dia ny: "mitondra fifaliana sy fihomehezana ho an'ny tontolo mila fanampiana mihomehy."
Jereo ny Reincarnations of Laurel sy Hardy manao indray
Jereo ny horonan-tsary mangina Bacher Boy, Ny sivana tsy ara-dalàna amin'ny lalàna, izay namoronanan'i Josh & Danny hatsikana manokana. Ny Bacher Boys dia nanao ity sarimihetsika ity talohan'ny nifandraisan'i Walter Semkiw tamin'izy ireo momba ny fiainany taloha toa an'i Laurel & Hardy.
Ankoatra izany, jereo ny Fikarohana momba ny firaisana mpanamory fahitalavitra, noforonin'i Josh sy Danny, izay mampiseho ny fihetsika nasehon'i Josh sy Danny rehefa nilazana ny momba ny fiainam-piainany taloha. Ho fanampin'izay, ny sary arisiva nomen'ny ray aman-drenin'izy ireo dia mampiseho ny fomba namoronan'i Josh sy Danny horonantsary slapstick tamin'ny naha-ankizy azy, namerina ny fivoaran'ny hatsikana an'i Stan & Ollie.
In Fikarohana momba ny firaisana, Ny ray aman-drenin'i Josh & Danny dia nadinadinina, izay nitantara fa ny zanakalahin'izy ireo dia mody nanao hoe Laurel & Hardy fony mbola tanora. Ho fanampin'izay, naseho ny fanangonana fahatsiarovana an'i Laurel & Hardy goavana an'ny Bacher Boys, ao anatin'izany ny tena akanjo anaovan'i Laurel & Hardy.
Ny fahafahan'ny fanahy maha-Ahtun Re manao famerenana amin'ny laoniny ny vatana vaovao
Josh & Danny dia nanomboka namerina ny fihetsika, ny fahaiza-manao ary ny talentan'i Laurel & Hardy, ary koa ny fanangonana an'i Laurel & Hardy memorabilia, taona maro talohan'ny nifandraisan'i Walter azy ireo momba ny maha-teraka ny vatana vaovao an'i Stan & Ollie. Ankoatr'izay, talohan'ny nifandraisan'i Walter tamin'ny Bacher Boys momba ny fiainany taloha tamin'ny 2005, dia tsy fantany ny toetran'i Josh sy Danny an'i Laurel & Hardy tamin'ny fahazazany, anisan'izany ny fanaovana sarimihetsika slapstick, ary koa tsy fantany ny fanangonana Laurel & Hardy. Ny tsy fahampian'ny fahalalana toy izany alohan'ny nifandraisan'i Walter tamin'i Josh sy Danny dia nanamafy ny fanamafisan'i Ahtun Re fa ny Bacher Boys no reincarnations an'i Laurel & Hardy.
Ireo toe-javatra mampiavaka ny vatana vaovao ireo dia mampiseho ireto zavatra manaraka ireto:
Fitoviana ara-batana amin'ny toe-javatra iainana taloha: Josh sy Danny dia mampiseho ny fitoviana hafahafa amin'i Laurel sy Hardy. Ny mampiavaka azy dia i Oliver Hardy izay mavesatra kokoa noho i Danny Bacher.
Fiainana Taloha: Namerina namorona ny fampisehoana komedikan'i Laurel sy Hardy ny zazalahy Bacher, araka ny asehon'izy ireo tamin'ny fampisehoana Ny fampisehoana mampihetsi-po indrindra eran'izao tontolo izao momba ny tantaran'ny komisiona, nataon'ny rahalahy roa, tao anatin'ny roa ora latsaka, nandritra ny roapolo tapitrisa dolara, ary ao amin'ny lahatsary nasongadiny tamin'ity pejy ity.
FAMPIANARANA SY FIVORIAM-BOLA novolavola tamin'ny alalan'ny fanambadiana: Ny ekipan'ny hatsikana an'i Laurel sy Hardy dia teraka indray tamin'ny maha-mpirahalahy roa azy. Ireo tranga ireo dia mampiseho fatratra ny fomba ahafahan'ny fanahy mikasa mandritra ny androm-piainany, toy ny fanaovan'i Laurel sy Hardy nofo nofo tao anatin'ny fianakaviana iray ihany.
Ian Stevenson, nanamarika izahay, nianatra Tranga kambana 31 izay nanaovana fanandramana tsy misy dikany ny fiainana teo aloha. Hitany fa tamin'ny tranga 31 rehetra, ireo kambana ireo dia nanana fifandraisana akaiky tany am-piandohana. Noho izany dia toa mitranga ny fisainan'ny fiainana mandritra ny androm-pianakaviana.
Ny Fanahy Mitarika: Ny trangan-javatra momba ny fanambadiana rosiana sy sarotra dia vokatry ny fanampian'i Ahtun Re, fanahy iray nampitain'i Kevin Ryerson.
Ankoatr'izay, mety ho ny fitarihana avy amin'ny fanahy no nahatonga an'i Harriet Wagniere, talen'ny Ivontoerana Metaphysical of New Jersey, mba hangataka ahy hiteny eo afovoany rehefa nihaona tamin'ny New Expo Life tany New York City aho tamin'ny Oktobra 2005, taloha. Nohazavaiko fa i Josh sy Danny no lasa ny fiverenan'i Laurel sy Hardy.
Ny fanasana nataony dia nahafahako nanolotra porofo momba ny fanambadiana vatana vaovao indray amin'ny Bacher Boys, ary koa ny fianakaviany sy ny namany, izay mino aho fa nanampy ny fanohanan'ireo olona ireo. Azafady, mariho fa ny fangatahan'i Harriet dia nitranga talohan'ny nanaovana ny lalao nifandray tamin'i Josh sy Danny. Raha izany, raha tena voatarika ny fangatahan'i Harriet, dia mety ho efa voalahatra mialoha ny fiarahako amin'ny Bacher Boys.
Fiovana amin'ny finoana: Laurel sy Hardy dia samy Kristianina, fa i Josh sy Danny kosa dia nanangana Jiosy. I Joel Bacher, rain'izy ireo, dia jiosy raha teraka tao amin'ny fianakaviana Kristiana i Jane reniny.
Affinity Cases: Josh sy Danny dia niharan'ny fanoheran'i Laurel sy Hardy hatramin'ny naha zazalahikely azy ireo. Noho izany, toa hita fa nankafizin'izy ireo manokana ny fiainany taloha. Na dia nomena ny saribakolin'i Laurel sy Hardy aza i Josh, izay mety ho nahaliana ny fahalianana, tsy manazava ny fiheverany an'i Laurel sy Hardy amin'ny maha olon-dehibe azy, araka ny asehon'i Danny ka lasa mpamorona zava-mahadomelina eran-tany misy an'i Stan sy Ollie , na ny fanapahan-kevitr'izy ireo ho lasa mpanao hatsikana matihanina sy mpanakanto.
Tsarovy fa i Danny dia manana palitao sy pataloha tena izy izay notafihin'i Oliver Hardy tao amin'ny efitranony, izay azony tamin'ny vidiny lafo. Ary koa, tamin'ny 1991, dia namorona kasety kasety misy mozika avy amin'ny sarimihetsika Laurel sy Hardy ry zalahy, izay ho lalaovin'izy ireo rehefa mandeha ao anaty fiarany izy ireo. Tamin'ny fotoana nifandraisako tamin'i Danny tamin'ny 2005 hanoro hevitra azy fa fantatra fa izy dia teraka tao amin'ny vatana vaovao indray i Oliver Hardy, tsy fantatro ny fiheveran'i Josh sy Danny an'i Laurel sy Hardy. Ny fanoherana an'io kisendrasendra io dia kely dia kely.
Ireo karazana tranga ireo dia antsoiko hoe "tranga misy fifandraisana", izay mahaliana ny olona amin'ny fiainany taloha.
Ny tranga manintona hafa dia ny: Trangam-panjakan'olo-tokana i Dorothy Dandridge Halle Berry
View: Bacher Boys Silent Movie: Ny sivana amin'ny lalàna
View: Ny mpanamory fahita any amin'ny Reincarnation TV dia misy ny Laurel & Hardy | Raharaha Bacher Boys